Mpanonta sary eto Madagascar
Esory ny afara
Photoshop an-tseraseraMpanonta saryMpanonta saryRindrambaiko fanovana sary
Tsidiho ny tranokala Hamantatra bebe kokoa
Fahatakarana ny workflow Photoshop
Ny fanovana sary dia mahatafiditra ny fizotry ny fanovana sary nomerika rehetra, na sary miorina amin'ny sarimihetsika na zavatra simika fakana sary taloha. Izy io dia mitaky fisainana mamorona sy fampiharana ny fahalalana hanovana sary mahazatra ho sary kanto. Izy io dia karazana zavakanto azo ampiharina amin'ny fahafinaretana na tombom-barotra. Betsaka ny olona te-hahazo vola fanampiny amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fanovana sary. Ireto misy torohevitra dimy momba ny fomba hahatongavanao ho mpamoaka sary.
Adobe Photoshop dia programa fanovana maimaim-poana ampiasain'ny olona an-tapitrisany hanatsara ny sarin'izy ireo. Mora ny mampiasa programa fanovana izay ahafahan'ny mpampiasa manodinkodina sy manambatra sary sy lahatsoratra, manitsy ny loko sy ny fifanoherana, ny vokatra ary ny mihodina ary ny manampy lahatsoratra. Mba hanatsarana ny sary hanatsarana ny fahazavany sy ny kalitaony, ny mpampiasa dia afaka manamboatra fanovana ambadika, manatsara ny sary, manala ny maso mena, ary manitsy ny famirapiratana sy ny fifanoherana. Ho fampiasana an-tserasera, Adobe Photoshop dia manana fitaovana sy serivisy mifototra amin'ny tranonkala ho an'ny fiaraha-miasa an-tserasera amin'ireo mpaka sary sy mpamorona sary hafa.
Aorian'ny fanombohana ny Photoshop dia misafidiana fampiharana antsoina hoe 'Photoshop' avy amin'ny menio fanombohana. Ny programa dia azo alefa amin'ny 'fomba azo antoka' tsy misy fiovana hita maso. Safidio ny rakitra ao amin'ny menio lehibe ary sokafy ny tetikasa amin'ny Photoshop. Miankina amin'ny kinovan'ny Photoshop ampiasaina, mety misy mihoatra ny safidy iray amin'ny fanitsiana ilay rakitra mitovy. Ohatra iray amin'ireo safidy Photoshop misy dia ny Paint Viewer, Paint Lasso, ary ny Map ny habe.
Aorian'ny fanokafana ny Photoshop dia ilaina ny manafatra sary ao anaty programa fanovana. Ho an'ity, alefaso ny programa ary safidio avy hatrany ny lisitr'ireo sary tianao hametrahana azy ireo amin'ilay tetikasa. Azonao atao ny misafidy ny manampy sary marobe na iray monja. Raha manana sary be dia be ianao hampiasaina, ny manafatra azy rehetra indray mandeha dia mety hanafaingana ny fizotrany. Raha tsy izany dia hiteraka fijery tsy miova mandritra ny tetikasa ny fampiasana tsirairay.
Rehefa avy manafatra ireo sary ianao dia misafidiana safidy toy ny 'Lightness and Tonal Range.' Io safidy io dia mifehy ny famirapiratan'ny sary sy ny haizin'ny sary. Ireo safidy roa ireo dia matetika ampanjifain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny safidy Photoshop mahazatra; na izany aza, azo apetraka amin'ny tanana ihany koa izy ireo. Raha ilaina izany dia azo ampiasaina serivisy fanovana sary na sary hanamora ny fizotrany ho an'ny mpampiasa.
Rehefa vita ny fanitsiana dia mety ho refesina indray araka ny filan'ny tetikasa ny sary. Na izany aza, misy serivisy sasany manome safidy maromaro kokoa raha ny amin'ny fanovana ny haben'ny sary no namboariny. Tsara kokoa raha mifantina ny habeny tadiavin'izy ireo amin'ny voalohany ny mpanjifa. Ny ankamaroan'ny orinasa dia manana habe ankafizina amin'ny sary maro; noho izany, ho hitan'ny mpampiasa fa mora kokoa ny manova ny sary lehibe kokoa izay mitovy habe sy mifanohitra amin'ireo sary hafa nalaina tamina toe-javatra nitovizany.
Rehefa vita ny fanodinkodinana sary dia tokony hahita ny bokotra toko na sosona ireo mpanjifa hahafahany mijery ny asany. Ny Clipping Mask Tool no fitaovana ampiasaina matetika indrindra rehefa manitsy, ary ny ankamaroan'ny mpamoaka lahatsoratra dia hanome fomba fijery tsotra momba ilay sarontava sarona. Ny sosona dia ampiasaina amin'ny fomba fanehoana kanto, toy ny famoronana aloka, fampisongadinana, haizina na fandokoana loko. Ny bokotra sosona dia mampiseho ny sosona voafantina ankehitriny. Aorian'ny fisafidianana ny sosona dia hampiseho ny safidy i Photoshop amin'ny fanodikodinana azy.
Na dia efa nisy aza ny Adobe Photoshop hatramin'ny solosaina taloha, tsy misy mahasolo ny workflow nomen'ny pieware. Ny workflow ao pieware dia ahafahan'ny mpaka sary mamita tetikasa ara-potoana. Rehefa manomboka ny fakana sary ny mpaka sary iray dia ho hitan'izy ireo ny safidy amin'ny fikolokoloana, ny fifandanjana fotsy ary ny fanatsarana sary ao anaty menio. Vantany vao vita ireo fizotran-javatra ireo dia hatonta amin'ny mpanonta ny sary.
Rindrambaiko fanovana sary
© Copyright 2021 mgbestphotoeditors.online - All Rights Reserved
Ity tranokala ity any amin'ny firenena / faritra hafa: